Nigeria: Madaxweyne Buhari oo raba dabargoynta Boko Haram – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxweynaha dhowaatan la doortay ee dalka Nigeria, Jen. Maxamadu Buhari oo kasoo jeeda Qowmiyadda Muslimka ee dalkaas, ayaa sheegaya in xoogagiisu ay billaabeen dabargoynta muqaawamada Boko Haram oo ah Jabhada Islaami ah oo ka dagaallanta Woqooyiga Nigeria.
Madaxweynaha cusub ee dalka Nigeria, Maxamadu Buhari oo hadlay intuu ku sugnaa dalka Niger ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dalkaasi ay billaabeen dagaal iyo olole ka dhan ah Boko Haram, kaas oo lagu soo afjarayo muqaawameynta kooxda.
Dalalka Niger, Chad iyo Cameroon ayaa waxa ay ka qeybgalayaan dagaalka lagu doonayo in Boko haram lagu soo afjaro. Nigeria waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii gobolada waqooyiga Bari ee dalkaasi looga sifeyn lahaa Boko Haraam.
Olole ka dhan ah Boko Haram ayey Nigeria wadaa
Arrintan ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo hay’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in ciidamada dalkaasi ay gabood ffalo geysteen. Laakiin ciidamada dalkaasi ayaa arrintaasi si carol eh uga jawaabay.
Itoobiya oo sii deysay saraakiil ka tirsan jabhadda ONLF